पत्नी हुँदा हुँदै चहारेर हिँड्ने कोही हाइहाइ हुने, कसैलाई पतित बनाउने ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/पत्नी हुँदा हुँदै चहारेर हिँड्ने कोही हाइहाइ हुने, कसैलाई पतित बनाउने ?
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ*त्यु प्र*करणमा शालिक र रवि लामिछानेका पक्ष विपक्षमा मानिसहरु विभाजित भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो पक्ष विपक्ष स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । कतिपय बुद्धिजीवी, लेखकहरुले व्यक्गित सन्दर्भभन्दा पनि प्रवृत्तिमै खोट औल्याएका छन् । यस्ता विषयहरु कतिपय आम सञ्चारको माध्यमबाट पनि सार्वजनिङ्क भएका छन् भने केही सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जनमानसमा पुगेका छन् ।
उनले रवि लामिछानेले चार वटा विवाह गर्दा उनको मामिला निजी हुने, उनले पत्नी हुँदा हुँदै प्रेमिकाबाट सन्तान जन्माउँदा अनै*तिक नहुने तर सेलिब्रेटी होइन, मरेर गइसक्यो भन्दैमा शालिकराम पतित हुने ? विषय विरोधाभाष भएको जुनुले लेखेकी छन् ।
उनी लेख्छिन्, ‘गरिब म*र्दा बिचरासम्म नभन्ने पतित भिड हुनेखानेको पक्षमा रातदिन रोईलो गर्छ । यस्तो लाग्छ यो भिड कानुनभन्दा माथिको हो । यीसँंग आफ्नै अदालत छ । ठ्याक्कै एउटै विहेत्तर सम्बन्ध !( अनैतिक) एउटाको निजी अर्कोको पतित ! वा रे पतित ढों*गीहरु !’
उनले ढों*गी समाजको गिदी नभएर लिदी भरिएको तर्क गरेकी छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘दिमागमा गिदीको सत्तामा विशेष खालको “लि*दी’ भएको प्रमाणित आफै गर्‍यौं ! के तिमीहरु दूधले नुहाएका “चोखो“ छौ ? के तिमीहरुले कसैका श्रीमती र छोरीमाथि गिद्दे नजर लगाएका छैनौं ?
घरका श्रीमती श्रीमान हुँदाहुँदै मौकामा चौका हान्ने दाउ खोज्दै हिड्छौ वा हिड्दैनौं ? फेसबुकको वालमा आदर्श छाट्ने तर च्याटबक्सका नाँ*गो च्याट गर्दै स्ख*लन हुने तिमीहरु नै होइनौ ? फेरि सालिकराम कसरी पतित त तिमीहरु कसरी पतित भएनौं ?’
म*रेको मान्छेको ला*शमाथिको नाँ*गो नाँच गरेर मानवीय संवेगको उपहास राम्रोसँग गरेको प्रमाणित भो । तर याद राख नाँगो भिड । भोलि आफै सालिकरामको ठाउँमा आफू झु*न्डि*न पर्ने अवस्था आउदैन भन्ने कसले भन्ने सक्छ ? र मान्छेहरुले म*रिसकेपछी छि छि र दुरदुर गर्दै मृ*त्यु*को तमासा बनाईदिने छन । किनभने यहाँ निमुखाको लागि बोल्दिने भि*ड छैन । किनभने यो अचेत भि*डले कुनैदिन आफू म*र्नुपर्छ भन्ने सम्म जान्दैनँ !
घरवाट हिड्दा श्रीमतीलाई यस्तो भनेर निस्केका थिए शालिकराम पुडाशैनी, सम्झनाले आफुलाई सम्हालन सकिनन् वेहोसीमै यस्तो भनिन्